warkii.com » Xeer-ilaaliyihii hore ee qaranka Axmed Cali Daahir oo shaaciyey arrin qarsaneyd
Muxuu guddoomiye Cawad kursigiisa ugala soo cararay PUNTLAND?
Xog: Cabdi Qeybdiid oo Cali Mahdi u gudbiyay codsi ka yimid R/Wasaaraha cusub
Ciidankii ilaalada Xabsiga dhexe oo lagu badalay ciidan laga keenay gobol kale
Kenya oo xabsiga dhigtay Soomaali badan + Sababta
Muxuu ahaa ujeedka kulankii dhex maray James Swan iyo Cabdi Xasan Maxamed?
Xeer-ilaaliyihii hore ee qaranka Axmed Cali Daahir oo shaaciyey arrin qarsaneyd
Muqdisho (warkii.com) – Xeer ilaaliyihii hore ee qaranka, Dr Axmed Cali Daahir oo wareysi siiyey Universal TV ayaa ka hadlay arrimo ku aadan garsoorka.
Axmed Cali Daahir ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo mas’uuliyiin ay ku jiraan oo diidan in la dhiso golaha adeega garsoorka dalka, si ay u sameeyaan Maxkamadda Dastuuriga oo go’aan kama dambeys ah ka gaari karto khilaafka kasta oo yimaada.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in la siyaasadeeyey dhamaan waxyaabaha muhiimka u ahaa dhismaha golaha adeega garsoorka, sida hay’adihii ka mid noqon lahaa, Qareenada laga soo xuli lahaa iyo bulshada rayidka, sida uu hadalka u dhigay.
Xeer ilaaliyaha qaranka oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in xilligan la joogo dalka uu u baahan yahay hirgelinta gole adeeg garsoor oo madax banaan.
Waxa kale oo ku baaqay in si deg-deg ah loo dhiso golaha adeega garsoorka, si buu yiri looga gudbo caqabadaha dalka ka jira, gaar ahaan kuwa siyaasadeed.
Si kastaba ha’ahaatee hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyadoo marar badan lagu cel-celiyey baahida loo qabo dhisamaha golahaasi, balse ma jirto tallaab ay u qaaday dowladda federaalka Soomaaliya, si loo helo maxkamad dastuuri oo lagu kala baxo.
Muxuu guddoomiye Cawad kursigiisa ugala soo cararay PUNTLAND?September 22, 2020
Xog: Cabdi Qeybdiid oo Cali Mahdi u gudbiyay codsi ka yimid R/Wasaaraha cusubSeptember 22, 2020
Ciidankii ilaalada Xabsiga dhexe oo lagu badalay ciidan laga keenay gobol kaleSeptember 22, 2020
Kenya oo xabsiga dhigtay Soomaali badan + SababtaSeptember 22, 2020
Muxuu ahaa ujeedka kulankii dhex maray James Swan iyo Cabdi Xasan Maxamed?September 22, 2020
Mohamed Bin Zayed oo Mareykanka kala hadlay qorshe ka dhan ah TurkeySeptember 22, 2020
IRAN oo luuqad adag ugu hanjabtay Mareykanka kadib tallaabadii uu qaadaySeptember 22, 2020
Xog: Madax goboleedyada oo walaac xooggan qaba iyo ujeedka ololaha ay wadaanSeptember 21, 2020
Meydka sarkaal ka tirsanaa madaxtooyada oo laga helay hotel ku yaalla MuqdishoSeptember 21, 2020
Beesha caalamka oo qoraal ay niyad jab ku muujisay kasoo saartay heshiiska doorashada SoomaaliyaSeptember 21, 2020